Kitapo farany tsara indrindra ho an'ny dia any Eropa - ALinks
Jolay 9, 2021 Shubham Sharma Eoropa, Travel, UK, zavatra vidiana
Betsaka kokoa ny kitapo fitsangantsanganana noho ny eny an-tsena - izay mahafinaritra satria ny mpanamboatra kitapo dia mamaly ireo mpandeha toa antsika izay mitady kitapo fitsangatsanganana, miasa, an-drenivohitra ary manintona. Ary izahay eto hanampy anao haka ny kitaponao farany lavitra. Ny fisafidianana ny fonosana marina ho an'ny dia dia singa iray manan-danja amin'ny drafitry ny dia. Misafidiana kitapo izay lehibe loatra ary tsy maintsy mitondra lanja be loatra ianao. Ho lasa kely loatra ianao ary tsy hampety ny zavatra rehetra ataonao amin'izany zavatra izany! Safidio ny fitaovana diso ary rehefa avy ny orana dia ho lena ny fitaovanao.
Misy siansa hahafantarana ny fomba fitetezana tsara indrindra - sy ny fomba hisafidianana azy! Nandany herinandro maro izahay nisafidianana ny kitapo fitsangatsanganana tsara indrindra ho an'ny dia. Efa an-jatony izahay no nanandrana, nitady an-tserasera nandritra ny ora maro izahay, ary nanandrana azy ireo tao amin'ny magazay mba hahatsapa hoe iza izy ireo. Ary farany, izahay dia namorona lisitry ny sasany amin'ireo Backpacks tsara indrindra misy amin'ny Internet. Azonao atao ny mividy an-tserasera azy ireo amin'ny rohy amazona omena etsy ambany amin'ny kitapom-batsy rehetra.
Kitapom-batsy ho an'ny dia
Osprey Farpoint 40 Racksack ivelan'ny trano sy ny dia
Ny fialan-tsasatra amin'ny faran'ny herinandro any an-tanàna na any anaty ala, mety tsara i Osprey's Farpoint 40. Ny fampiatoana ny tariby tariby maivana dia mizara ny enta-mavesatra manomboka amin'ny fehin-kibo ka hatramin'ny fehin-kibo. Ny tontonana miverina amin'ny lamosina dia mampitombo ny rivotra ary mampidina ny harato amin'ny fehikibo sy fehikibo. Ny fampiatoana manontolo dia apetraka ao ambanin'ny tontonana misy zipper, izay mamorona profil mivezivezy mivezivezy. Raha te hiditra amin'ny efi-trano lehibe dia sokafy ny slider fanidiana. Ny ao anaty dia zavatra bitika misy paosy harato. Ny tadiny roa dia misoroka ny fiovan'ny entana mandritra ny dia. Ny paosy fametahana zipper dia misy ety ivelany hitazonana ny teboka fifandraisanao madio sy zaitra mba hitrandrahana fitaovana fanampiny. Na inona na inona fanapahan-kevitra horaisinao, ny tadin'ny straightjacket no manohana ny enta-mavesatrao. Rehefa mila manipy ny Farpoint 40 any aorian'ny aotobisy ianao dia mahazo ny tanany ambony sy ny sisiny.
Kitapo Travel Pacsafe Venturesafe mitondra entana
Tena tsy dia misy dikany, ny Venturesafe EXP isan-karazany amin'ny kitapom-batsy Pacsafe dia mamela anao hifandray sy hiaro ireo zava-tsarobidinao. Ny paosy sy ny paosin'ny harato anatiny dia voarafitra ho an'ny tavoahangin-drano, trano fidiovana ary entana. Ny kitapom-batsy azo antoka dia misy singa fiarovana Pacsafe maromaro, miainga amin'ny mpiambina vy tsy miovaova eXomesh tsy miovaova tafiditra ao anaty lamba ao anaty kitapo mankany amin'ny kitapo fisintonana Carrysafe splashguard. Miaraka amina fanokafana fomba famandrihana boky ho an'ny fonosana mora ho an'ny efitrano lehibe indrindra, ny 45liter Venturesafe EXP45 dia manolotra fahaiza-mitondra betsaka indrindra ho an'ny ankamaroan'ny orinasam-pitaterana an'habakabaka.
Ny mpiara-miasa tsara indrindra mandritra ny faran'ny herinandro lava dia ny Osprey's Far point 55. Aza misalasala manampy akanjo ba hafa sy baoty tsy mahazaka rano roa; fonosana ity dia natao ho an'ny ainy hatramin'ny 50 fiainana. Ny fampiatoana ny Light Wireframe dia mamindra ny fihenjanana amin'ny fehikibo mankany amin'ny fehikibo. Ny tontonana miverina amin'ny lamosina dia mampitombo ny rivotra ary mampidina ny harato amin'ny fehikibo sy ny fehikibo. Ny fampiatoana manontolo dia apetraka ao ambanin'ny tontonana misy zipper, izay mamorona profil mivezivezy mivezivezy. Mba hahatratrarana ny efitrano lehibe, esory ireo slider fanidiana. Ny paosy harato ho an'ny zavatra kely dia ao anatiny. Ny tadiny roa dia manakana ny entana tsy hihetsika mandritra ny fandefasana.
kitapoKitapo farany tsara indrindra ho an'ny dia any EropaRucksackTravelpack
Tabletza tsara indrindra ho an'ny mpianatra any India
Takelaka tsara indrindra ho an'ny mpianatra any UK
Samsung Phone Covers Uk no tsara indrindra
Sifotra volo tsara indrindra latsaka ny 10 pounds
Manomana fitsangatsanganana any Italia? Tsidiho ny zavatra mahasarika mpizaha tany!
Afghanistan (11) fanampiana (10) Aostralia (18) Aotrisy (12) Kanada (21) Shina (17) Kolombia (7) Danemark (11) DR Kongo (7) Frantsa (16) Germany (17) mandehana (27) fahasalamana (29) Hong Kong (11) trano fandraisam-bahiny (28) trano (15) India (82) Irak (14) Italia (22) asa (84) Malezia (12) Meksika (22) ny vola (34) Nizeria (12) Norvezy (12) Pakistan (13) mpitsoa-ponenana (36) Rosia (14) Arabia Saodita (9) am-pianarana (20) Espaina (18) fianarana (36) Soisa (7) Thailand (13) zavatra vidiana (107) zavatra atao (48) Travel (164) vorontsiloza (25) Emira Arabo Mitambatra (15) Oganda (9) UK (55) USA (34) rohy mahasoa (23) Venezoela (12) visa ho (92)